के मलाई निष्क्रिय अवधिमा मेरो रेट प्लान स्विच गर्ने अनुमति हुन्छ ?
हुँदैन । प्लानको स्विचिङ तपाईं एक्टिभ अवधिमा रहेको समयमा मात्र गर्न अनुमति हुन्छ ।
Unlimited Power बाट Unlimited Funz Plan मा कसरी प्लान स्विच गर्न सकिन्छ ?
तपाईंले *118*6*2*3# डायल गरेर UMB मार्फत प्लान स्विच गर्न सक्नुहुन्छ ।
म Unlimited Power Prepaid प्लानलाई रुचाउँछु । के मैले नयाँ Unlimited Funz Plan बाट मेरो पहिलाको प्रिपेड प्लानमा स्विच ब्याक गर्न सक्छु ?
सक्नुहुन्छ, तपाईंलाई Unlimited Power Prepaid प्लानमा स्विच ब्याक गर्न अनुमति हुन्छ ।
प्लानहरूलाई स्विच गर्दा हाल मैले मजा लिइरहेको सबै विद्यमान प्रोमो तथा सब्सक्रिप्सनहरूको के हुन्छ ?
नयाँ प्लानमा स्विच गरिसकेपश्चात सबै प्रोमोसन तथा सब्सक्रिप्सनहरूलाई फिर्ता लिइनेछ ।
प्लानहरू स्विच गरेपछि के मैले तत्कालै नि:शुल्क बेसिक इन्टरनेट प्राप्त गर्छु ?
हो, तपाईंले प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
प्लान स्विच गर्ने मेरो अनुरोध सफल भयो भनेर मैले कहिले थाहा पाउन सक्छु ?
प्लान स्विच सफल भएपश्चात तपाईंलाई एउटा SMS नोटिफिकेसन पठाइनेछ । ग्राहकले नि:शुल्क डाटाको मजा लिन SMS प्राप्त गरेपछि टप अप गर्न सक्छन् ।
म हाल अर्कै मोबाइल सेवा प्रदायकको ग्राहक हो । के मैले U Mobile को Unlimited Funz Plan पोर्ट इन गर्न सक्छु ?
पाउनुहुन्छ । कृपया नजिकको U Mobile स्टोर/डिलरहरूमा जानुहोस् वा अनलाइनमा https://u.com.my/support/switch-to-u मा पोर्ट इन गर्नुहोस् ।
मैले UMI/GX प्लानहरूलाई कसरी सब्सक्राइब गर्न सक्छु ?
तपाईंले UMB, SMS तथा MyUMobile App मार्फत सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ । थप जानकारीका लागि कृपया निम्नमा जानुहोस्:
Giler अनलिमिटेड डाटा:https://www.u.com.my/plans/gilerunlimited/prepaid
अनलिमिटेड मोबाइल इन्टरनेट: https://www.u.com.my/plans/prepaid/unlimited-mobile-internet